Mety tsy mampidi-doza na mampidi-doza mihitsy aza ny tasy fotsy eo amin’ny hoditra. – Noor Health Life
Mety tsy mampidi-doza na mampidi-doza mihitsy aza ny tasy fotsy eo amin’ny hoditra.
Amin’ny dingana samihafa amin’ny fiainana, ny hoditsika, indrindra fa ny hoditry ny tarehy, dia mandalo fiovana maro, vokatr’izany indraindray ny hoho, ny moka, ny moka, indraindray ny tasy, izay sitrana ho azy irery na aorian’ny fitsaboana. ny tasy eo amin`ny hoditra dia mitaky fikarakarana manokana. Ny voalohany dia ny pentina mainty miseho amin’ny endriky ny lolo amin’ny faritra rehetra amin’ny tarehy noho ny may, tapaka, aretina na vohoka, tsy fahampian-dra be na ny vokatry ny zava-mahadomelina, raha voamarika ara-potoana. tsy ampiasaina ary arahina ny toromariky ny dokotera, dia manjavona na manjavona ireo tasy ireo.
Na izany aza, raha misy faritra fotsy miseho amin’ny faritra rehetra amin’ny vatana toy ny tarehy, tenda, soroka, tratra, lamosina na fe, dia mampanahy izay tsy tokony hodian-tsy hita. Mizara efatra ireo pentina fotsy ireo. Ny karazana voalohany dia misy loko fotsy madinidinika, volontsôkôlà maivana, izay tsy mampidi-doza sy azo tsaboina. Holatra kely no mahatonga azy ireo, izay miteraka tasy eo amin’ny hodi-tava. Mivonto kely ny endrik’ireo tasy ireo ary mazàna manjavona miaraka amin’ny fikorontanana kely. Ireo tasy ireo dia miharihary kokoa amin’ny fahavaratra ary mihalevona amin’ny ririnina. Indraindray izy ireo dia mibaribary amin’ny tsemboka be loatra, saingy mihamaivana kely rehefa avy nandro. Ho an’ireo izay miloko matroka dia mipoitra avy lavitra amin’ny hodi-tava ireo tasy fotsy ireo, fa ho an’ireo izay miloko marevaka dia mirona mavokely.
Raha ny tokony ho izy dia tsy miteraka mangidihidy ireo toerana ireo, fa amin’ny toe-javatra sasany dia misy ihany koa ny fitarainana. Raha misy olona iray ao an-trano iharan’ireo pentina fotsy ireo dia mety ho voan’ny olona hafa koa. Noho izany dia tsara kokoa ho an’ny marary ny manaraka ny fepetra fisorohana miaraka amin’ny fitsaboana. Atokana ohatra ny zavatra ampiasainao toy ny lamba famaohana, mosoara, akanjo, sns.
Ny karazany faharoa dia misy pentina fotsy boribory mipoitra eo amin’ny tarehin’ny ankizilahy sy ankizivavy manana endrika marokoroko. Indraindray dia toy ny hoe maina sy lasa fotsy ny hoditra, tsy mangidihidy. Ny hevi-diso matetika momba ireo tasy fotsy ireo dia noho ny tsy fahampian’ny kalsioma no mahatonga azy ireo, saingy maro ireo antony mahatonga ireo tasy ireo ka ny tena zava-dehibe dia ny tsy fahasalaman’ny zaza, na dia taratry ny masoandro aza. ho tratran’ireo toerana ireo ihany koa. Ary koa, amin’ny toe-javatra sasany, ny kankana vavony no mahatonga azy ireo. Ireo tasy ireo koa dia miseho eo amin’ny handriny, ny takolany, ny saokany ary indraindray eo amin’ny tendany, saingy tsy mifindra ary manjavona ho azy raha tsy misy fitsaboana.
Ny karazany fahatelo dia ny habokana, izay areti-mifindra vokatry ny bakteria antsoina hoe M. habokana. Matetika no misy fiantraikany amin’ny hoditra sy ny nerveuse ilay aretina. Misy dingana efatra izy io. Amin’ny dingana voalohany dia misy boribory fotsy miseho eo amin’ny vatan’ilay marary, indrindra eo amin’ny takolany, ny tanany, ny feny ary ny vodiny, ary mahatsiaro ho ketraka. Izany dia famantarana tena manan-danja amin’ny aretina, satria ny aretina dia eo amin’ny dingana voalohany amin’ity dingana ity, dia raha omena avy hatrany ny aretina sy ny fitsaboana marina, dia azo fehezina ny aretina. Raha tara ny aretina dia mety hiparitaka haingana ary tsy azo sitranina.
Ny karazany fahefatra dia ahitana mangana. Tsy mifindra io aretina io. Amin’ny voalohany dia misy pentina semi-fotsy miseho amin’ny faritra rehetra amin’ny vatana ary raha misy volo eo anelanelan’ireo pentina ireo dia lasa fotsy ihany koa. Raha eo amin’ny hodi-doha ireo tasy ireo dia lasa fotsy ny follicles volo.
Amin’ny toe-javatra sasany, ny tasy dia tsy miova mandritra ny taona maro, ary amin’ny olona sasany dia miparitaka haingana be ka lasa feno pentina ny vatana manontolo. Ny mararin’ny aretim-pivalanana dia tsy mahazaka ny hamafin’ny masoandro, ankoatra izay dia tsy mahazo aina izy ireo ary amin’ny ankapobeny dia salama tsara.
Misy pentina fotsy koa izay asainay. Matetika noho ny hatsaran’ny tarehy no mahatonga ireny tasy ireny, toy ny vehivavy sy tovovavy maro, raha mampiasa crème de bleaching foana izy ireo mba hanafotsiana ny hodiny, ka voa ny hodiny voajanahary. ۔
Ary koa, raha misy allergie na tsy fahazakana dia mety hitranga ny mangidihidy sy ny tasy may, toy izany koa ny fampiasana ny henna simika dia mety hiteraka blemies amin`ny hoditra. Na mainty na fotsy anefa ny tasy dia tsy tokony hatao tsinontsinona fa raha tokony hotsaboina tena dia manatona dokotera avy hatrany ary manaova fitsaboana feno.Nahoana no miseho eo amin’ny vatana ireo tasy fotsy ireo?
Matetika ianao no mahita olona misy pentina fotsy mibaribary eo amin’ny hodiny, nefa nahoana no mitranga izany ary ahoana no hisorohana izany?
Io aretina na aretina io dia tena mampanahy ny olona, ​​izay tena manan-danja ihany koa.
Dokotera manam-pahaizana, profesora, mpandidy, mpanolo-tsaina ao amin’ny Noor Health Life Institute. Araka ny voalazan’ireo manampahaizana rehetra ireo, ny Noor Health Life dia afaka manome anao ny tsara indrindra. Ary ny Noor Health Life indray dia manentana anareo mba hanohana ny mahantra sy hanampy ireo izay eny amin’ny hopitaly.Ny Noor Health Life dia manampy ny marary sahirana.Miangavy anareo indray aho mba hanohana ny Noor Health Life ary hanampy ny marary mahantra amin’ny alàlan’ny Noor Health Life. misaotra anareo rehetra. Raha mamaky lahatsoratra momba ny Noor Health Life ianao dia vakio tsara. Vakio hatrany.
Heverina fa ity aretina ity, antsoina hoe bursa, dia fanehoan-kevitra amin’ny fisotroana ronono aorian’ny fihinanana trondro, saingy mandà izany ny siansa momba ny fitsaboana.
Raha ny marina, dia mitranga izany rehefa tsy mamokatra pigment sasany ireo sela manome ny loko voajanahary ho an’ny hoditra.
6 Aretina miseho eo amin’ny hoditra
Araka ny voalazan’ny Noor Health Life, matetika dia miseho amin’ny endrika holatra kely na pentina fotsy ilay aretina.
Olona 70 tapitrisa eran-tany no voan’io aretina io, antsoina koa hoe aretin’ny autoimmune, satria rehefa miharihary izany, dia manafika ireo sela izay miasa amin’ny famerenana ny loko haingana ny hery fiarovana ao amin’ny vatana.
Raha tratra tany am-boalohany, izany hoe rehefa tsy miseho eo amin’ny hoditra ny tasy, fa mazava ny lokony, dia azo inoana fa hiverina amin’ny endriny voalohany ny hoditra.
Fampiasana AC mahatonga ny aretina hoditra: fikarohana
Teny an-dalana, amin’ny fitsaboana ity aretina ity, ny tanjon’ny manam-pahaizana eo anoloany dia ny hamerina haingana ny loko sy hitazonana ny vokany.
Ho an’ity tanjona ity dia ampiasaina ny crème steroid sasany mba hifehezana ny areti-maso raha toa ka mahasoa ihany koa ny Oion Mint.
Amin’ny toe-javatra sasany, ny fitsaboana dia manamaivana ny lokon’ny hoditra tsy misy fiantraikany mba hahatonga ny tasy fotsy ho hita kokoa.
Ny fitsaboana maivana sy ny fandidiana dia safidy ihany koa. Raha mila fanontaniana sy valiny bebe kokoa ianao dia afaka mahazo Noor Health Life amin’ny mailaka ary mifandraisa aminay amin’ny WhatsApp. noormedlife@gmail.com